Isa Linux pane yako Android neLinux Deploy | Linux Vakapindwa muropa
Makore mashoma apfuura apo yekutanga Samsung Galaxy yaive ichiri kutariswa semamwe akanakisa mafoni munyika Ndakatanga kuverenga zvidiki zveticha izvo pandanga ndichiyedza ndichikwanisa kuisa Ubuntu pane ino smartphone Nerubatsiro rweiyo imwecheteyo system isu takagadzira yedu ARM vhezheni uye chaive chiitiko chekuedza kuzviita.
Zvakanaka, sezvo makore anopfuura Maitiro ari nani uye akareruka abuda kwaanotibvumidza kutora sisitimu yekushandisa mukati meApple, ndosaka ndichifunga kugovera imwe yeaya mafomu anogona kutibatsira.
Mune ino kesi isu tinoshandisa chishandiso iyo inogarwa mukati meGoogle zvinyorwa izvi "Linux Bvisa"Ndinokusiyai link iyi kuti mugone gadza panoIzvo zvakakosha kwandiri kuti nditaure kuti zvakafanira kuve nemidzi ropafadzo saka kana iwe usina foni yako yakadzika midzi iyi Anwendung haishande iwe.
Zvinodikanwa zveLinux Deploy
Android yakakura kupfuura 2.1
Kupfuura 5 GB yeyemukati ndangariro kana, zvichikundikana izvo, SD ine inopfuura 5GB uye iri kirasi yegumi kana yepamusoro kana sisitimu ichiitirwa pano.
Dhawunirodha VNC kubva kuGoogle chitoro
Dhawunorodha BusyBox kubva Play Sotre
Iyo yekubatanidza internet kana, zvichikundikana izvo, yakanaka data data sezvo iwe uchizotora iyo ARM mufananidzo weiyo system inokufarira iwe, ivo vanowanzo kuve vanopfuura 2 GB.
Zvakanaka, tatoisa Linux Deploy pane yedu android, Tichaenderera mberi nekugadziriswa kweshoko.
Mukati meapp tichawana mamamenyu matatu, maviri kumusoro uye mumwe pasi, iyo inotifadza pari zvino ndiyo iri pasi, iyo iri pazasi kurudyi iri padyo ne "MIRA".
Kuve mukati meiyi menyu isu tichawana akati wandei sarudzo:
Architecture (zvakakosha kuziva kuti ndeipi dhizaini yako processor kana ruoko, arm64 armhf kana armel)
Yekuisa mhando (ini ndinokurudzira faira)
Uye pakupedzisira nzira (apa unotsanangura kuti ichave iri mune yako yekuchengetera kwemukati kana kwekunze).
Yakagadzira zvigadziriso zvaunofunga zvakakosha Kune zvaunoda, mune zvinotevera sarudzo pazasi izvi isu tichawana kuti ndeipi mhando ye default faira system iri EXT2, pano ini ndinopa zano kusiya zvarinazvo nekutadza.
Mune sarudzo dzekupedzisira mu "GUI" isu tinogonesa iro bhokisi uye pano tinogona kumisikidza iyo desktop yemamiriro ekuti iiswe mukugovera.
Pano tine sarudzo mbiri:
Chekutanga kurodha pasi mufananidzo weiyo system yatinoda kuisaTinofanira kutarisa izvi pamambure kana tichiichengeta tinofanirwa kuona kuti ndeipi nzira Sezvo iyo isu tinofanirwa kuratidza muchikamu che "Kuisa nzira" pakupedzisira isu tinongopfuurira kudzoka kuchiratidziro chikuru uye mune yepamusoro kurudyi menyu, isu tinosarudza iyo sarudzo "Isa".
Sarudzo yechipiri ndeyekusiya zvese sezvazviri mukugadziriswa uye rega Linux Deploy ichengete zvinotevera:
Isu tinodzokera kuchinyorwa chikuru uye Mune yekumusoro kurudyi menyu, isu tinosarudza iyo sarudzo "Isa" apa ichaenderera kubatanidza kune internet kurodha pasi zvese zvinodikanwa kuti ugadzire iyo system mufananidzo, isu tinongofanirwa kumirira kuti maitiro apedze. Maitiro aya anogona kutora kubva pamaminitsi makumi matatu zvichienda mberi nekuti zvinoenderana nekumhanyisa kurodha kweinternet yako.
Kana kumisikidza kwapera, isu tinongofanirwa kutanga sisitimu Nekubatsira kwemenyu yepasi pane "Kutanga".
Iye zvino isu tinongofanirwa kuenda kuVNC yatinotora kubva kuGoogle Store uye isu tichaisa iyo IP kero inoonekwa pane iyo Linux Deploy main screen uye neizvo isu tatova mukati medu Linux kugovera pane Android.
Chekupedzisira, kana iwe uine keyboard reBluetooth negonzo, uchave neruzivo rwuri nani, kunyangwe ndichifanira kusimbisa kuti ndine mumaoko angu Pwn Runhare runenge ruri nani, asi handina bhajeti yekugona kutenga smartphone yeiyi caliber.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Isa Linux pane yako Android neLinux Deploy
Izvo hazvisi kuisa linux pane Android, iri Emuls linux pa Android, inorema uye inononoka, uye zvakare kana iwe ukadya yakawanda ndangariro iyo Android mhondi system inova iyo admin system inouraya maitiro kana ivo vachidya yakawanda yekuyeuka kutemwa. iyo chroot maitiro uye iwe unorasikirwa Iyo emulator haina kukurudzirwa, kunze kwesystem haigone kana kuwanikwa kubva kune admin, iwe unofanirwa kugadzira kubatana kuburikidza vnc, iri yakaipa chigamba uye kukanganisa.
Haisi kuteedzera zvachose. Chroot haisi kutevedzera, iko kuuraya. Kuwana kunogona kuitwa nenzira dzakawanda, vnc, ssh, pamwe neX server uye kumhanyisa iyo script yeLinux kutsiva iyo Android imwe, kuirodha mu framebufer. Zvinononoka? Handizive kuti unobvepi izvozvo uye mhondi haina kumbondiuraya kuti ndisunungure memory. Izvo zvinonakidza semuenzaniso kune Android TV mabhokisi. Ini handinzwisise kusavimbika kusine hwaro.
Mhoroi, pandinoenda kuINSTALL, ini handiwani ekurodha pasi mashandiro, ini ndinongowana DISPLOY kaviri uye hapana chakaiswa, ndinenge ndichiita chakaipa here? Kana iwe uine mhinduro, ini ndingafarire.
ndine hurombo anoti ka2 KUKUNDA